Geejjiba bilisaa poolisootaaf kenninu yeroo hedduu mormiin numuudata, konkolaachisaa taaksii - BBC News Afaan Oromoo
Geejjiba bilisaa poolisootaaf kenninu yeroo hedduu mormiin numuudata, konkolaachisaa taaksii
Dargaggoon kun namootni humna hin qabnellee taaksii keenya keessatti tolaan tajaajila geejjibaa argatu jedha.
"Namoota humna hin qabne, barsiisotaa fi poolisii herreega taaksii hin kafalchiifnu. Namoota ogummaa kana qaban waraquma eenyummaa isaanii qofa nu agarsiifnan tola tajaajila," jedha.
Poolisoota uffata seeraa uffatan akkanumatti waan beeknuuf hin gaafannu warra siivilii uffate garuu waraqaa eenyummaa ni gaafanna jedha.
Maanguddootaa fi warra dadhabootaaf tajaajila geejjiba bilisaa
Dargaggoonni xiyyaara qe'eetti hojjetaniin Kaayiroo gahan
"Namoota kana tola kanin geejjibsiisu kabajan isaaniif qaburraa ka'eeni. Galata isaaniif galchuufi. Barsiisaan barsiisee kanaan nu gahe kabajamuu fi galateeffamuutu malaaf."
"Poolisii fi qaama nageenyaa yoo ilaalle ammoo nageenya keenya eeguuf warra gahee guddaa qabanidha. Kanaaf isaaniin galateefachuufi."
Tajaajila geejjiba tolaa poolisootaaf kennuun mormiin yeroo hedduu akka isa muudatu dubbata Maaruuf.
"Hawaasni keenya ilaalcha poolisiif qaburraa kan ka'e tajaajilan ani kennu kana ni mormu. Maaf poolisii tola geejjibsiifta naan jedhu."
"Animmoo ilaalchi namni poolisootaaf qabu jijjiiramuu qaba kan jedhun yaada. Nuti akkanatti waan gaarii yeroo oolluf poolisoonnis uummataaf ilaalcha gaarii qabaatu."
Yaada namoonni tajaajilli tolaa kuni poolisootaaf hin malu jedhan kana jijjiiruuf jecha buufatalee poolisii magaalaa Adaamaa keessa jiran hedduu mooraa isaanii keessa biqiltuu cilaaddamaa fi ancabbii' dhabuu hima.
Kunis cilaaddamni ergaa dhala namaa hunda ija tokkoon tajaajilaa jedhu ibsuufi jedha.
Ancabbiin ammoo hadhaa'aadha garuu qorichummaaf oola. Kana jechuun poolisoota jibbuus balaaleffachuus dandeenya garuu gaafa rakkanne kan dhaqnee akka qorichaatti itti fayyadamnu isinuma kan jedhu dhaamuufi jedha Maaruuf.
Akka maaruuf jedhutti tajaajila taaksii tolaa poolisootaaf kennaa jiru kana namootni yaada kennan harka 80 caalan 'hin maluuf isaan tola hin tajaajilin' naan jedhu jechuun himan.
Kanaafis tajaajila taaksii tolaan kennu kana cinaatti ilaalcha namootaa qaruuf akka hojii ijootti hojjechaan jira jedha.
Galii kee hin miidhuu?
Yeroo jireenyi qaala'e kanatti barsiisotaa fi poolisoota tajaajila taaksii tolaa kennuun dinagdee keerratti miidhaa hin qabuu jennee gaafanne.
"Namni kan garaa walitti jabaatu bu'aa humnaa olii wan barbaaduufi malee qaala'iinsuma jireenyaa kana akki itti jalaa baanu silaa wal danda'uudhaani" jedha.
"Namni hunduu osoo gaarii waliif yaadee qaala'iinsa jireenyaatuu ittisuu ni dandeenya."
Dargaggoo Maaruuf, namoota ogummaa akka fayyaa, namoota soorama bahaniifi kanneen biroollee tajaajilamtoota tolaa kana keessatti dabaluuf yaadus sababa humnaa ol ta'eef gochuu hin dandeenye jedha.
Hojii kana erga magaala Adaama keessatti jalqabee waggaa tokko ta'uu fi hanga ammaatti barsiisotaa fi poolisoota waraqaa eenyummaa isaanii qofa ilaaluun tajaajila tolaa kennaafii akka jiru hima.
Hawaasarraas duub-deebii gaarii argachuutti hedduu gammadeeras jedha.
"Namootni taaksii kiyyaan tajaajilaman gocha kiyya kanatti hedduu akka gammadan natti himu. Namootni gaariin akkanaa osoo nuuf baay'atanii jedhanii yaada naaf kennu. Galmee namootni waa'ee tajaajila taaksii kiyyaa irratti qaban itti galmeessanis qopheesseefiin jira."
Ammaan dura hojii kana magaalaa Finfinneetti jalqabuu fi namootni waliin jalqaban garuu akka itti hin fufne himeera.
"Magaalaa Fifinneetti taaksiiwwan hanga 15 tahan amansiisee hojii akkanaa jalqabnee turre. Kan poolisootaa mormii waan qabuuf baay'een isaanii barsiisotuma qofa tola geejjibsiisaa turan."
Magaalaa Adaamaattis taaksiiwwan sagal amansiisee jalqabanii ture garuu hundisaaniituu yerooma gabaabaa keessatti dhiisan" jedha Maaruuf.
Dargaggoo maaruuf tajaajila amma jalqabe akka itti fufu himeera.
"Mul'anni kiyya uummata qaroome akka horannuufi. Karaa Dr. Abiyyi hordufuun filadha. Walii walii keenyaaf yaaduu qabna."
"Amma taaksiirratti haadha ulfaaf, dubartii daa'ima qabatteef, maanguddootaaf dursa kan kennu tokkollee hin jiru. Kuni akka dhufuuf hojjechuudha mul'anni kiyya gara fuulduraa" jedha Maaruuf.
Goodayyaa suuraa 'Poolisootaa fi Barsiisota herreega hin kafalchiisfnu'
Aadaan wal-jaalachuu, wal-kabajuu kan abbootii keenyarraa dhaalle badaa jira isa deeffachuu qabna kanaaf dargaggootarra imaanatu jira jedhe.
Beeksisa barsiisonnii fi poolisoonni tajaajila taaksii bilisaan argatu jedhu taaksii isaa keessatti maxxanse namootni biroo taaksii hojjetan 'dhiibbaa maaf nurratti uumta' jedhanii si'a lama na jalaa buqqisanii kan amma jiru yeroo sadaffaaf kan maxxanse ta'uu hima.
Gargaaraa isaa kan ta'e dargaggoo Warqinaa Taaddasaa akkuma maamiltootasaa ol naqeen waa'ee namoota tajaajila taaksii tolaan argachuu danda'anii hundasaaniif ibsa kenna.
"Herreega guuruu kootin dura 'warri poolisii fi barsiisotaa waraqaa eenyummaa agarsiiftanii tajaajila taaksii kana tola deemuu ni dandeessuun' jedhan" jedha.
Maamiltootni akka waan mootummaan nu dirqamsiisee itti fakkaatus jiru jedha.
"Namoonni ilaalcha faallaa ta'ee fi arrabsoo itti dabalanis jiru, hamma bakkasaanii gahanii bu'anitti obsineetuma hojii keenya itti fufaa jirra" jedha Warqinaan.
Dhiiroonni maaliif dubatroota caalaa of ajjeessuu?